Service Representative Archives - Glory Assumption Space
Service Representative - Male (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)
1.	Service Representative - Male (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။ •	AGTI (သို့) B.Tech (EP/EC) •	အသက် (၂၀ ~ ၃၀) နှစ်ဝန်းကျင်ခန့် ရှိရမည်။ •	စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဖူးသူများ ပိုမိုအဆင်ပြေပါသည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ် ခန့်ရှိပါက ပိုမိုအဆင်ပြေပါသည်။ •	English ဘာသာစကား အသင့်အတင့် ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။ •	ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုနိုင်သူ၊ အခြေခံရှိသူများ ပိုမိုအဆင်ပြေပါသည်။ •	အလုပ်ချိန် (8:30 AM – 5:00 PM ) •	ယူနီဖောင်းရှိသည်။ ဖယ်ရီရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လူသုံးကုန်နှင့် စားသောက်ကုန်များ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Service Representative – Male (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ နိုင်ငံခြား Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Service Representative – Male (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။ • AGTI (or) B.tech (EC/EP) • Minimum (2 ~ 3) years experience in related field. • Age around (25) and above • Able to use English Language and prefer driving licence • အလုပ်ချိန် (8:30 AM – 5:00 PM ) • ယူနီဖောင်းရှိသည်။ ဖယ်ရီရှိသည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )